Petya Rudzikunuro Anopinda Mubhizimusi Renyika Dzose MuMhirizhonga | ECommerce nhau
Rudzikunuro nyowani inonzi "Petya" akarwisa mawebhusaiti akati wandei emakambani makuru, mumwedzi ichangopfuura iyo WannaCry rudzikunuro kurwisa, yakaunza nyonganiso pamakomputa anopfuura mazana matatu ezviuru pasirese. Petya anotendwa akabatana kune zvimwe chete mhando yekushandisa zvekubira pane WanaCry.
Petya akatotora zviuru zvemakomputa kubatwa, zvichikanganisa makambani nezvivakwa zvavo zvinotangira kubva kuUkraine kuenda kuUnited States kudzokera kuIndia. Izvi zvakakanganisa airport yekuUkraine yepasi rese, uye kutumirwa kwenyika dzakawanda, zvemutemo uye zvekushambadzira mafemu. Izvi zvakatungamira mukumiswa kwenzvimbo dzekuongorora mwaranzi kunzvimbo dzeChernobyl.
Europol, iro repasi rose simba remutemo, haina kukwanisa kupa data rekushanda rine chekuita nekurwiswa uku, mutauri wayo Tine hollevoet Vakati vaiedza "kutora mufananidzo uzere wekurwiswa" kubva kumaindasitiri ake uye nevamwe vake vemitemo.
Petya "chiratidzo chekuti mhosva yepamhepo ingashanduka sei nekukura, uye zvakare, ichi chiyeuchidzo chebhizinesi uye kukosha kwekuchengetedza cyber," akadaro director director we Europol Rob Wainwright.
Kusiyana neWannacryKurwiswa kwaPetya hakune chero mhando ye "kuuraya switch," sekureva kweEuropol.
United States timu yekuverenga komputa yekuchimbichimbi yakatanga kugamuchira mishumo yakawanda yePetya achitapukira makomputa pasirese, uye ivo vaona kuti iyi misiyano inonamira makomputa 'maWindows marekodhi uye inoshandisa kusagadzikana kweserver yavo yemeseji.
Iyo RAMSON_PETYA.SMA inoshandisa akasiyana siyana ehutachiona mumaveketa emakomputa ane hutachiona, ayo akashandiswawo mu wannaCry kurwisa, uye mune iyo PsExec chishandiso, chinova chishandiso cheMicrosoft icho chinoshandiswa kumhanyisa maitiro uchishandisa kure kure kuwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Petya Rudzikunuro rwunopinza bhizinesi repasirese mumhirizhonga
Zvingaita here kuti rekodhi yakaganhurirwa maitiro eGoogle muEurope?